Xeer ilalaiyaha Guud Ee Qaranka oo u digay dadka sameeeyay Documentiyada been abuurka ah – Radio Muqdisho
Xeer ilalaiyaha Guud Ee Qaranka oo u digay dadka sameeeyay Documentiyada been abuurka ah
Xeer ilaaliyaha Guud Ee Qaranka Dr Axmed Cali Daahir oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa waxaa uu ka hadlay Dadka sameeya Documentiyada Been abuurka ah Ee ka howlgala Gudaha Dalka isagoo Xeer ilaaliyuhu digniin u diray Dadkaas.
“Waxaa jira Hay.ado Madbacado iyo shaqsiyaad Sameeya Documentiyo been abuur ah sida shahaadooyin aqoonsiyo iyo waxyaabo kale kuwaas oo ah Howshii ay qaban lahayd dowladda waxaan uga digay in howshaas ay siiw adaan waa in ay joojiyaan hadii kale talabo adag baa laga qaadi doonaan”ayuu yiri Dr Axmed.
Xeer ilaaliyaha ayaa waxaa uu ugu baaqay Hay,adaha amaanka dalka qaabilsan si gaar ah Hay,adda dambi baarista CID in ay talaabo ka qaadaan dadka ku howlan falalkaas oo dhibaato ku ah Bulshada soomaaliyeed waxaana uu ugu goodiyay shirkada ka ganacsada sameynta Documentiyada been abuurka ah in ay cawaaqib xumo ay la kulmi doonaan hadaysan deg deg u joojin.
wixii ka dambeeyay Markii Dowladii Dhexe ee Dalku lahaa ay meeesha ka baxday waxaa jiray dad gaar ah oo madbacado sameytay isla markaana dadka u sameeyay Documentiyo been abuur ah kuwaas oo dhibaato u horseeday dalka .
Gudiga Farsamada Maamul u sameynta Gobolada Mudug iyo Galgaduud oo hadlay halka ay u mareyso Howshoodu